In ka badan saddex meelood meel dadka Suudaan oo hadda wajahaya cunto yari ba’an | dayniiile.com
Home WARKII In ka badan saddex meelood meel dadka Suudaan oo hadda wajahaya cunto...
In ka badan saddex meelood meel dadka Suudaan oo hadda wajahaya cunto yari ba’an
In ka badan saddex meelood meel dadka Suudaan ayaa hadda wajahaya cunto yari ba’an, sida ay sheegtay hay’adda cunnada adduunka ee WFP ,waxayna sheegtay inaysan haysan lacag ku filan oo ay wax kaga qabato.
Hay’adda Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tiradaas, ay kor u kacday boqolkiiba toddoba marka loo eego sannadkii hore, oo u dhiganta ilaa 3 milyan oo qof. Waxay u tirada ayaa hadda ah 18 milyan, ama 40% tirada dadweynaha Suudan ee ay abaarta saameysay.
Warbixin kale oo ay soo saaren Ha’yadaha Plan International, Save the Children, UNICEF, iyo World Vision ayaa waxay ka digeen in 3 milyan oo carruur Suudaani ah oo ay da’doodu ka yar tahay 5 sano ay soo food saartay nafaqo darro ba’an iyo in ilaa 375,000 ay u dhiman karaan sannadkan daaweyn la’aan.
Previous articleMaamulka deegaanka Baxdo ee Bariga gobolka Galgaduud oo goob fagaare ah ku soo bandhigay saanad ciidan oo lagu furtay dagaalka shalay iyo Maxaabiis
Next articleDagaallo qadhaar oo weli ka socda aagga Donbas ee bariga Ukraine.
Shir Garoowe Uga Socday Maamulka Dowladaha Hoose Ee Puntland Oo Lagu...